'सम्बन्ध बिग्रेपछि फेसबुकमा ब्ल्याकमेल, कतिले पोर्न साइटमै अपलोड गरिदिन्छन्'
काठमाडौं । टेकुमा एउटा सानो त्रिपालभित्र छ, अपराध महाशाखाको साइबर क्राइम फाँट। त्यहाँ अचेल दिनभर तनाव हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक बनेसँगै यसको दुरुपयोग पनि बढिरहेको छ। साइबर क्राइम फाँटमा..
नेपाल आइडल टप फाइभबाट ‘भक्कानिँदै' बाहिरिए अमित बराल
काठमाडौं । एपीवान टेलिभिजबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल आइडल-२ को टप फाइभबाट बुटवलका अमित बराल बाहिरिएका छन्। शुक्रबार प्रसारित कार्यक्रममा उनले मीनराज पौडेलसँगै ‘खुसी छु म आज’ बोलको गीत गाएका थिए। बिहीबारको..
प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डसहित २१ जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा
काठमाडौं । नेपाली सेनाबाट भागेर तत्कालीन नेकपा माओवादीको ‘जनमुक्ति सेना’मा सामेल भएका एक युवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । मोरङको..
न्यूयोर्क । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको सिएनएन टेलिभिजनको कार्यालयमा बम राखिएको भनेर एकजना अज्ञात व्यक्तिले टेलिफोनबाट चेतावनी दिएपछि सो कार्यालयलाई प्रहरीले खाली गराएको छ । स्थानीय समय अनुसार बिहीबार राती १० बजे..
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्ववनमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै अख्तियारले कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक..
काठमाडौं । लामो समयदेखि लुटपाट र गुन्डागर्दीमा संलग्न गुन्डा नाइके राजन लिम्बुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले गोली चलाएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले काठमाडौंको कालोपुलमा लिम्बुमाथि गोली प्रहार गरेको..
ढाँटेर जागिर खानेसँग सरकारले २ करोड असुल गर्ने
काठमाडौं । निजामती किताबखानाले झुक्याएर जागिर खाने पाँच दर्जन कर्मचारीबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल्ने निर्णय गरेको छ । रकम असुल उपर नहुँदासम्म ती सबै कर्मचारीको पेन्सन पट्टा रोक्ने निर्णयसमेत..
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः मन्त्रिका निवास भैंसेपाटी सर्ने, राजकिय पाहुनाका लागि १० भबन बनार्इने
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिहरूको सरकारी निवास सार्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरस्थित पुल्चोकमा रहेको हालको मन्त्रीक्वाटरलार्इ विशिष्ट पाहुनाको अतिथिगृह बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । अब मन्त्रीहरूको सुविधासम्पन्न..
काठमाडौं । स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनका संयोजक डा सीके (चन्द्र कान्त) राउत राज्यविरुद्धको संगठित अपराध ९राज्यद्रोह० मुद्दाको पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटले राउतलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा..
विश्व मै सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने पहिलो मुलुक लक्जेम्बर्ग
एजेन्सी । सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने लक्जेम्बर्ग विश्वकै पहिलो मुलुक भएको छ । २०२० यो मुलुकमा रेल, ट्राम र बसको भाडा हटाइने भएको छ । महŒवाकांक्षी सरकारी प्रस्तावअन्तर्गत यसो गर्न लागिएको..
जापानमा दुई अमेरिकी विमान ठोक्किए, ६ जना वेपत्ता
एजेन्सी । जापानमा तेल भर्ने क्रममा हावामा दुई अमेरिकी लडाकु विमान आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएका छन् । लडाकु विमानमा सवार ६ जना नौ सैनिक घाइते भएका छन् । अमेरिकी लडाकु विमान..
अर्थमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म शेयर लगानीकर्ताहरु अन्नासन बस्ने
काठमाडौं । शेयर बजार तिब्र गतिमा ओरालो लागेका बेला लगानीकर्ताहरु सम्पत्तिको रक्षका लागि भन्दै अनसन बस्ने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको राजिनामा माग गर्दै मंसिर २३ आइतबारदेखि अनसानमा..
मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि ‘विशेष कक्ष’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्नका लागि ‘एक्सन रुम’ बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको अनुगमन र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो..
काठमाडौं । सरकारसँग वार्ता सुरू भएपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा वार्ता..
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चार देशको भ्रमण गर्दै, व्यापार बृद्धिका लागि आह्वान
पनामा सिटी । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सोमबार पनामास्थित व्यापारिक समुदायसमक्ष चीन र पनामाबीच सहयोग र समन्वयको बृद्धिका लागि आग्रह गर्नुभएको समाचार छ । उनले पनामाको राजधानी पनामा सिटीमा आयोजित एक..
श्रृंखलाले जितिन् मिस वर्ल्डको मल्टिमिडिया अवार्ड, अब अन्तिम ३० मा
काठमाडौं । मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडाले चीनमा जारी मिस वर्ल्ड अन्तरगत मल्टिमिडिया अवार्ड जितेकी छिन् । यससँगै अन्तिम ३० मा उनको स्थान सुरक्षित भएको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको नतिजामा श्रृंखलाले..
सिके राउतलाई रिहाइ गर्न दर्ता भएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौं । मधेस बिखण्डको नारा लगाउँदै आएका डा सिके राउतको गिराफ्तारीविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । गत असोज २९ गते जिल्ला अदालत रौतहटमा तारेख बुझाउन आएका राउतलाई..
सहसचिव डा तारानाथ पौडेल घुस सहित पक्राउ
काठमाडौं । सहसचिव डा तारानाथ पौडेल घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । पौडेललाई एक लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनलाय पोखरामा..
अब सुनाउनुहोस १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले पीडा र सङ्घर्षका अनुभव
काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले द्वन्द्वपीडितका पीडा र सङ्घर्षका अनुभव सुनाउन तीन जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ । चौतारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यही मङ्सिर १७ सिरहा, २६ कैलाली..
शितयुद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति एच डब्लु बुसको निधन
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज एच डब्लु बुसको ९४ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । शितयुद्ध अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका राष्ट्रपतिका रुपमा स्मरण गरिने बुसको शुक्रबार निधन भएको उनका आफन्तले..
श्रीमतीको नाम राखेर नागरिकता ?
काठमाडौं । पुराना नागरिकतामा बुबाको मात्रै नाम लेखिन्थ्यो। नयाँ नागरिकतामा आमा र श्रीमतीको नाम थप्न सकिने व्यवस्था गरियो। पछिल्लो समयमा आमाको नाम थपेर नागरिकता बनाउने धेरै छन्। नेपालगन्जका एकजना कानुन..
मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा हेड टु हेड च्यालेन्जको टप २० मा परिन् श्रृंखला
काठमाडौं । चीनमा जारी विश्व सुन्दरी (मिस वर्ल्ड) प्रतियोगिता अन्तरगत श्रृंखला खतिवडा समूह बिजेता हुँदै हेड टु हेड च्यालेन्जको टप २० मा परेकी छन् । उनले भोटङ मार्त आफ्नो समूहमा..
‘समृद्धि’ मा नेपाल पहिला भन्दा सुध्रियो, नेपाल भन्दा भारत पछाडि
काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो सरकारले समृद्धिलाई थेगोको रुपमा प्रचार गरिरहेको बेलामा बेलायतको एक थिंक ट्यांक संस्थाले जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अवस्था पहिलाको तुलनामा अहिले सुधार आएको देखाएको छ । दक्षिण..
चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि हट्यो जोरबिजोर प्रणाली
काठमाडौं चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले यातायातमा लागू गरेको जोरबिजोर प्रणाली हटाएको छ । काठमाडौंमा आजदेखि शुरू हुने एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनका कारण लागू गरिएको जोरबिजोर प्रणाली आज बिहान साढे ११ बजेदेखि लागू..
क्रिकेट खेलेर एक वर्षमै सन्दीप करोपति बने, ठूला खेल खेल्न भ्याई नभ्याई
काठमाडौं । युएईमा चलिरहेको क्रिकेटको नयाँ संस्करण टी–१० लिगमा कमेन्टेटरले सन्दीप लामिछानेको प्रशंसा गरिरहेका थिए । विश्वचर्चित कमेन्टेटरको प्रशंसाका लायक बनेका सन्दीपले केबल १८ वर्षको उमेरमै विश्वका नामुद क्रिकेटरहरूसँग खेलिसकेका..
सेनाको भर्नामा ३ करोड २२ लाख घुस, ३ अधिकृतसहित ११ जना बर्खास्त
काठमाडौं । नेपाली सेनाको कोर्ट मार्सलले भर्नामा भएको अनियमितता दोषी ठहर भएका ३ अधिकृतसहित ११ जनालाई बर्खास्त गरेको छ। २०७३ देखि ०७५ सम्म भएका विभिन्न पदको भर्नामा अनियमितता गरेको भन्दै २३..
अफगानिस्तानको राजधानी काबुल आक्रमणमा ११ नेपाली घाइते
अफगानिस्तानको राजधानी शहर काबुलमा बुधवार भएको आक्रमणमा ११ नेपाली घाइते भएका छन्। उक्त घटनामा ४ विदेशीसहित १० जनाको मृत्यु भएको थियो। अफगानी विदेश मन्त्रालयका अनुसार घटनामा ५ बेलायती नागरिक पनि घाइते..
यस्ता छन् सोमबार गोप्य राखिएका मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णय
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी..
झोले कार्यालयः वडाध्यक्षलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ सेवा आदानप्रदान
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडाका सेवाग्राही केही काम पर्‍यो कि तुरुन्तै वडाध्यक्ष दिकबहादुर कुलुङलाई फोन गर्छन् । अनि वडाध्यक्षलाई जहाँ भेटियो त्यहीँ सेवा आदानप्रदान गर्छन् । स्थानीय..
देश निर्माण र समृद्धिको अभियान ‘देशका लागि दुई दिन’, महिनाको दुई दिन श्रमदान अनिवार्य
काठमाडौं । बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीलाई महीनाको दुई दिन जनश्रमदान गर्न अनिवार्य गरेको छ । ‘देशका लागि दुई दिन’ कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक घरधुरीले महीनाको दुई दिन अनिवार्य जनश्रमदान गर्नुपर्ने नियम..
Results 1994: You are at page 20 of 67